N'Ogun, Ndị Uweojii Ejidela Mmadụ Anọ Maka Ịtọrọ Nwata Ahọ Iri Na Atọ - Igbo News | News in Igbo Language
N'Ogun, Ndị Uweojii Ejidela Mmadụ Anọ Maka Ịtọrọ Nwata Ahọ Iri Na Atọ
May 13, 2021 - 15:29
Aka ndị uweojii na steeti Ogun akpàrálá ụmụokorobịa anọ maka ịtọrọ otu nwatkịrị nwaanyị gbara ahọ iri na atọ na steeti ahụ, ma gwa ndị be ha wèta narị puku naịra ise (N500,000), maọbụ ha agbagbuo ya.
Nke a bụ nke e mere ka ụwa mara site n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uweojii na steeti ahụ, bụ DSP Abimbola, John Nelson, bụ onye kọwara na ihe ahụ mèrè na mpaghara Onipanu, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Odo/Ota nke steeti ahụ.
O nyèrè aha mmadụ anọ ahụ dịka Abimbola, John Nelson (gbara ahọ iri abụọ na otu), Adeleke Ayotunde (gbara ahọ iri abụọ na iteghete), Adekunle Basit (gbara ahọ iri abụọ), na Abey Fagbemi (gbara ahọ iri abụọ); ma kwuo na ha nwụchikọrọ ndị ahụ oge e wètàchààrà ha mkpesa site n'aka Adejunwon Odunowo, bànyere nwa ya nwaanyị (gbara ahọ iri na atọ), onye o kwuru na o dunyere ozi oge o jiri ọkara gata elekere isii nke mgbede ụbọchị Tọọzdee izuụka gara aga, mana ọ batàghịzị.
Dịka o siri kọwaa, onye ahụ wetara mkpesa ahụ kwùrù na ka ọ gachara obere oge ha jiri màlite ịchọ nwata ahụ, na ha nwètàrà òkù ekwentị site n'aka ndị a maghị ndị ha bụ; ha wee na-ekwu ka e wètara ha ego dị narị puku naịra ise (N500,000) ka ha wee tọhàpụ nwata nwaanyị ahụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ nwa ha, n'ihi na ọ bụ ha tọọrọ nwata ahụ.
Dịka ọnụ na-ekwuru ndị uweojii ahụ siri kọwaa, mgbe ha wètàchàrà mkpesa ahụ, onyeisi ndị uweojii na mpaghara ahụ, bụ CSP Bamidele Job zipuru ndị ọrụ ya ozigbo, ha wee malite ime nnyòcha, iji chọpụta ma nwụchikọọ ndị omekoome ahụ.
Ka ha na-emezị nnyòcha ahụ, ndị uweojii ahụ chọpụtazịrị ma nwụchikọọ otu onye n'ime ndị ntọ ahụ na mpaghara Cele, dị n'Ota, na steeti ahụ. Site na nnyòcha ndị ọzọ e mere ka nke ahụ gachara, a chọpụtakwara na ndị ahụ tọọrọ nwata nwaanyị ahụ ma ga zoo ya n'ime ụlọ otu nwoke a maara dịka Maazị Adekunle Basit.
Ha bàkwàzịrị n'ebe ahụ e zoro ya bụ nwatakịrị, wee zọpụta ya n'enweghị mmerụahụ ọbụla. Ka e jidechara ndị òtù ya, ndị uweojii ahụ nwụchikọkwara onyeisi ndị òtù ntọ ahụ n'ụtụtụ ụbọchị Mọnde, dịka ọ na-achọ iri mbọmbọ ọsọ, oge ọ nụrụ maka njide ahụ e jidere ndị òtù ya ndị ọzọ aka ha dị n'arụrụala ahụ. O wee bụrụ etu ahụ ka ndị uweojii ahụ siri nwụchikọọ ndị arụrụala anọ ahụ. Ha akpọnyekwala ndị ezinụlọ nwata ahụ nwa ha n'udo na ọñụ.
Onyeisi ndị uweojii na steeti ahụ, bụ CP Edward Awolowo Ajogun kwupụtàrà afọ ojuju ya banyere ezi ọrụ ahụ ndị ọrụ ya rụrụ n'ịnwụchikọ ndị ntọ ahụ na ịzọpụta nwata ahụ na ndụ, ma nakwazie ndị uweojii ahụ aka maka nke ahụ.
O nyekwazịrị ntụziaka ka e wèré okwu ahụ nyefèé n'aka ngalaba pụrụ iche na-ahụ maka ihe metụtara ntọrị mmadụ, ka ha wee mee nnyòcha miri èmì banyere nke ahụ ma nyekwazie ndị ahụ ntaramahụhụ kwesiri ha.
Ọ gwakwazịrị ọhaneze ka ha gbaa mbọ na-aña ntị ma na-erube isi nye ntụziaka dị iche iche ndị uweojii na ndị ọrụ nchekwa dị iche na-enye, iji gbanahị ịdaba n'aka ndị ọjọọ, maọbụ kwaa 'ngarammara' n'ikpeazụ, ọkachasị oge ugbua ọnọdụ nchekwa ala Nigeria debere imi na ọnụ ka ntọọ.
N'Anambra, Ndị Iwe Juru Obi Agbaala Onyeohi Ọkụ Maka Izu Handkachiifù
INEC Ekewàpụtakwuola Ogige Atụmakwụkwọ Ọhụrụ n'Anambra
Ndị Uweojii Anambra Ejidela Ndị Otu Nzuzo Ebe Ha Na-Anabata...
Izunna Okafor Apr 18, 2021 0
ASC Ekwela Ndị Anambra Nkwà Ezi Nchekwa Maka Nzukọ Ọnwa...
Chidi Igwe Aug 8, 2019 0
Ndị Uweojii Anambra Anwụchiela Mmadụ Isii Maka Ohi
Izunna Okafor Apr 8, 2021 0
Na Yola, Ọkụ Agbarikọọla Ọdụ Ahịa Dị n'Ụlọọgwụ Gọọmenti
Izunna Okafor Jun 27, 2021 0
N'Imo, Ndi Omekoome Awakpola Ụlọọrụ Uweojii Na Ụlọnga,...
Nwoke Agbaala Onwe Ya Ọkụ Ebe Ọ Chọrọ Ịgba Ọdụ Mmanụ Ụgbọala...
Izunna Okafor Dec 5, 2021 0
Ihe Mberede Okporoụzọ: Ọbara na Ozu Mmadụ Ejupụtela n'Okporoụzọ...
Ndị Uweojii Azọpụtala Agadi Nwaanyị Ndị Ntọ Tọ̀ọ̀rọ̀, Jide...
NDLEA Ebibiela Ọgwụike Gburu Ego Ruru Ijeri Naịra Iri Ise...
N'Awka, Ashbishọp Ibezim Ebikwasala Mmadụ 54 Aka n'Isi,...
Izunna Okafor Jul 11, 2021 0
Ụgbọelu Mbụ Ga-Awụcha n'Ọdụ Ụgbọelu Anambra n'Epure 30...
Izunna Okafor Aug 24, 2021 0
Obiano Na Aha Echichi Ọdịnala Ya